म गर्भावस्था को समयमा एक पट्टी लगाउन छन्
अब सम्म, विशेषज्ञहरु गर्भावस्था को समयमा एक पट्टी लगाउने हो कि बारेमा सहमति पुग्न सक्दैन। केही डाक्टर आवश्यक सिफारिस यसलाई एकदम को मेरुदण्ड मा लोड कम भएकोले दोस्रो trimester मा एक दल को मद्दत खोज्न, र धेरै तरिका मा expectant आमा को लागि सजिलो जीवन बनाउँछ। अरूलाई, यसको विपरीत, कडा थप सहयोग बच्चा बोकेको को प्रक्रिया मा विरोध गर्नुभयो। आफ्नो विश्वास प्रकृति एक महिला र उनको शरीर, यस्तो गर्भावस्था र प्रसब रूपमा, एक लोड सार्न सक्षम सिर्जना गरेको छ, र यसरी मात्र र किनभने आफ्नो पेट मांसपेशीमा को कमजोर भएको पट्टी रोक्छ तथ्यलाई मा जायज छ। तर दुवै theoreticians र चिकित्सकहरु को बहुमत दल को प्रयोग स्वागत गर्दछौं।
आधुनिक बजार विशेष उत्पादनहरु टायर को विभिन्न प्रकारका एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। यसलाई त्यहाँ केही सङ्केत गर्छ हुँदा, चिकित्सकको सल्लाह यसलाई प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। गर्भावस्था को समयमा पट्टी लगाउन आवश्यक छ: यो आन्दोलन hamper हुँदैन र squeeze को श्रोणि को हड्डी मात्र भ्रूण गर्न समर्थन प्रदान गर्नुहोस्। खाट मा झूट गर्दा सजिलो तरिका ठीक एक धनुकोष्ठ लगाउन। तपाईं यो सबै समय दुखाइ को यदि पनि सास्ती लगाउने सक्दैन। राति अतिरिक्त सहायता हटाइनु पर्छ, र आदर्श दिन तपाईं पट्टी हरेक 3-4 घण्टा लगाउन विश्रामहरू लिनु आवश्यक छ। अपवाद यसको प्रयोगको लागि गम्भीर सङ्केत गर्छ छन्, त्यसपछि दैनिक विश्रामहरू निर्मूल गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ पट्टियाँ धेरै प्रकार छन्। एक कसरी चयन गर्न गर्भवती महिला लागि दल, यो उपस्थित चिकित्सक बताउन भन्दा राम्रो छ। कम अक्सर कटि क्षेत्र र पेट मा लोचदार कपडा आवेषण संग एक उच्च जाँघिया छ जो एक तथाकथित बेल्ट-पन्त, प्रयोग। मा राख्नु यसको धेरै सजिलो र लगाउने, तर यो पनि कायर छ भएकोले स्वच्छता नियम केही असुविधाहरु पठाएमा जो हरेक दिन एक पट्टी, मेटाउन oblige। यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र दल खरीद गर्न अनुमति छैन, र यो एकदम महंगा छ।
एक बेल्ट रूपमा गर्भावस्था को समयमा सबै भन्दा साधारण सरल पट्टी। यो दैनिक लुगा धुने आवश्यक छैन र पूर्ण बढ्दो पेट समर्थन गर्दछ। चौडा र साँघुरो: आजको निर्माताहरु बेल्ट दुई प्रकार प्रस्ताव। संकीर्ण ब्यान्ड त व्यापक थप सुविधाजनक मानिन्छ छाला मा कटौती गर्न सक्छन् र बेचैनी पैदा। यो बेल्ट Velcro सतह, जसद्वारा गर्भावस्था को प्रत्येक महिना एक महिला girth को मात्रा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ संग संलग्न छ।
हालैका वर्षहरूमा यो सक्रिय महिला गर्भावस्था को समयमा र प्रसब पछि दुवै प्रयोग गर्ने विश्वव्यापी पट्टियाँ प्रयोग गर्न थाले। यसबाहेक, पहिलो र दोस्रो मामला मा प्रभाव, एकदम विपरीत। धनुकोष्ठ यस प्रकारको व्यापक र साँघुरो भाग एक बेल्ट छ। भ्रूण को सही स्थिति कायम गर्न - गर्भावस्था दौरान, फराकिलोकालागि भाग कमर कायम गर्न, र साँघुरो प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ एउटा सानो चमत्कार हुँदा, एक महिला उनको आंकडा चिन्ता गर्न थाल्छ। को भुँडी को सामान्य भाग कि जवान आमा छोटो समयमा पुरानो प्रकारका फेला पार्न अनुमति दिन्छ: यस मामला मा, यो विपरीत एक पट्टी राख्छ।
धेरै घरेलू निर्माताहरु अझै पनि तस्मा संग तय जुन पट्टियाँ, उत्पादन। विशेषज्ञहरु चरम असुविधाको मनमा यो लगाएका सिफारिस छैन। पहिले, गर्भावस्था को समयमा एक पट्टी दैनिक प्रयोग गर्न पर्याप्त कठिन छ। र दोश्रो, यो लोचदार गुण छैन कि एक सामाग्री सिर्जना छ, र यो हानिकारक पेट छ।
हाल अधिकांश निर्माताहरु कपास लोचदार जर्सी को पनि अपेक्षाकृत सस्तो पट्टियाँ बनाउन। यो सामाग्री छाला बाहेक, एलर्जी कारण छैन सास फेर्न गर्न अनुमति दिन्छ। सबै भन्दा साधारण गर्भवती orlett लागि पट्टी मानिन्छ। बजार मा धेरै वर्ष को लागि यस कम्पनी पहिले नै संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबै भन्दा राम्रो निर्माताहरु को रूपमा नै स्थापित।
गर्भावस्था को पहिलो महिना। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
गर्भावस्था को 12 हप्ता आफ्नो शरीर के हुन्छ?
गर्भावस्था लागि के सपना
गर्भावस्था को समयमा रक्तअल्पता। कारण र रोकथाम
बोरिस Piotrovsky: जीवनी, परिवार, उपलब्धिहरू, फोटो
किन र कसरी अल्ट्रासोनिक Liposuction सञ्चालन गर्न
विभिन्न तरिकामा "Maynkraft" गर्न griefers रूपमा
एंगस मैकलारेन - राम्रो वृद्धि संभावनाहरु अष्ट्रेलियन अभिनेता
गर्मी र जाडोमा नवजातको लागि कति डायपर? फलाल्यान्ड डायपर
Evalar आहार। मान्छे र अनुप्रयोग सुविधाहरू समीक्षा
प्रभावकारी र सुरक्षित सूथिंग होम्योपैथिक तैयारी रूपमा Tenoten समीक्षा